Fluoxymesterone (Halotestin) အမှုန့် (76-43-7) ≥98% | AASraw ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးဝါး
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Fluoxymesterone (Halotestin) အမှုန့်
rating: SKU: 76-43-7. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Fluoxymesterone ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Halotestin) အမှုန့် (76-43-7) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Fluoxymesterone (Halotestin) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ဗြဲ Fluoxymesterone (Halotestin) အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်:
ထုတ်ကုန်အမည်: Fluoxymesterone/Halotestin အမှုန့်
CAS နံပါတ် - 76-43-7
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 265 ℃
Fluoxymesterone/Halotestin Powder ဆိုတာ ဘာလဲ
Fluoxymesterone သည် အမျိုးသားများ၏ ဝှေးစေ့အတွင်းမှ ထုတ်လုပ်သည့် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လိင်ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်သော Testosterone တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Testosterone ပမာဏ အနည်းငယ်ကို အမျိုးသမီး၏ သားဥအိမ်နှင့် adrenal စနစ်တို့တွင်လည်း ထုတ်လုပ်ပါသည်။
Fluoxymesterone အမှတ်တံဆိပ်အမည်မှာ Halotestin ဖြစ်သည်။ Halotestin သည် Testosterone နှင့် ဆင်တူသော ပေါင်းစပ် အန်ဒရိုဂျင် သို့မဟုတ် အမျိုးသား ဟော်မုန်း ဖြစ်သည်။ Fluoxymesterone သည် အန်ဒရိုဂျင် receptors များနှင့် သူ့ကိုယ်သူ ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် ပရိုတင်းများပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်သည့် ဆဲလ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် အချို့သော ပရိုတင်းများ ပေါင်းစပ်မှုကို တိုးလာစေခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသူများ၏ ပေါင်းစပ်မှုကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားပရိုတိန်း၏အမျိုးမျိုးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါတယ်, အချို့သောအမျိုးအစားများ၏ကြီးထွားမှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်း။ ရင်သားကင်ဆာ ဆဲလ်များ၊ အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါလက္ခဏာများကို ဖြစ်စေသော ဆဲလ်များကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး သွေးနီဥများ ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
Fluoxymesterone သည် အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အဖြူနီးပါး၊ အနံ့မရှိသော၊ ပုံဆောင်ခဲမှုန့်၊ သို့မဟုတ် 240 ℃ခန့်တွင် အရည်ပျော်ပြီး ပြိုကွဲမှုနှင့်အတူ။ ၎င်းသည် လက်တွေ့အားဖြင့် ရေတွင် မပျော်ဝင်နိုင်၊ အရက်ထဲတွင် အနည်းငယ်သာ ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး chloroform တွင် အနည်းငယ် ပျော်ဝင်ပါသည်။
fluoxymesterone အတွက် ဓာတုအမည်မှာ androst-4-en-3-one၊ 9-fluoro-11,17- dihydroxy-17-methyl-, (11β,17β)- ဖြစ်သည်။ မော်လီကျူးဖော်မြူလာမှာ C20H29FO3 ဖြစ်ပြီး မော်လီကျူးအလေးချိန် 336.45 ဖြစ်သည်။
Fluoxymesterone/Halotestin Powder ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ဟော်မုန်းများသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဂလင်းများမှ ထုတ်ပေးသော ဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး သွေးကြောအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ အခြားတစ်ရှူးများတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဝှေးစေ့အတွင်းမှထုတ်လုပ်သော Testosterone ဟော်မုန်းသည် အသံနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးအမျှင်များတိုးလာခြင်းကဲ့သို့သော အမျိုးသားလက္ခဏာများအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ ကင်ဆာကုသရန် ဟော်မုန်းကုထုံးကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဆဲလ်ကြီးထွားမှုအတွက် လိုအပ်သော ဟော်မုန်းများအတွက် receptors အချို့သော အကျိတ်ဆဲလ်များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရှိနေကြောင်း လေ့လာမှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ဟော်မုန်းကုထုံးသည် အချို့သော ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်တန့်ခြင်း၊ ဟော်မုန်း receptors များကို ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် အကျိတ်ဆဲလ်မှ အသုံးမပြုနိုင်သော တက်ကြွသောဟော်မုန်းအတွက် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အလားတူအေးဂျင့်များကို အစားထိုးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဟော်မုန်းကုထုံးများ၏ မတူညီသော အမျိုးအစားများကို ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်/သို့မဟုတ် သက်ရောက်မှုရှိသော ဟော်မုန်းအမျိုးအစားအလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။
Fluoxymesterone ကို အန်ဒရိုဂျင်အဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ အန်ဒရိုဂျင် ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားများ၏ လက္ခဏာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် သို့မဟုတ် လှုံ့ဆော်ပေးသော Testosterone နှင့် Androsterone ကဲ့သို့သော ဟော်မုန်းများ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများတွင် ဤဟော်မုန်းများသည် အီစထရိုဂျင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကင်ဆာကုထုံးအဖြစ် အန်ဒရိုဂျင်ကို အီစထရိုဂျင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆန့်ကျင်ရန် အသုံးပြုကာ ကင်ဆာကြီးထွားမှုကို နှေးကွေးစေပါသည်။
Is Fluoxymesterone/Halotestin Anabolic Steroid
Fluoxymesterone ဟုလည်း အများအားဖြင့် လူသိများသော Halotestin သည် ပိန်သောကြွက်သားထုထည်ကို တိုးလာစေရန်အတွက် ကာယဗလသမားများက ပါးစပ်ဖြင့်သောက်နိုင်သော androgenic anabolic steroid တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကာယတည်ဆောက်မှုဈေးကွက်တွင် 2mg၊ 5mg နှင့် 10mg အရွယ်အစားသုံးမျိုးဖြင့် ထွက်လာပြီး Calcium stearate၊ ပြောင်းဖူးကစီဓာတ်၊ Lactose၊ sorbic acid နှင့် tragacanth အပါအဝင် မလှုပ်ရှားနိုင်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ အများအပြားပါရှိသည်။
Halo သည် အလွန်အားကောင်းပြီး အစွမ်းထက်သည်။ ဟို steroid တစ်မျိုး Analogue သည် Testosterone ၏ အစွမ်းသတ္တိ 19 ဆ နှင့် အန်ဒရိုဂျင် ခွန်အား သည် Testosterone ၏ အစွမ်းသတ္တိ 8.5 ဆ ရှိသည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် လက်တွေ့တွင် လူသားများတွင် အနည်းငယ်နည်းသော anabolic ခွန်အားကို ပိုင်ဆိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းထားသည်။ အားကစားသမားများနှင့် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူများသည် ကြီးမားသောခွန်အားတိုးလာမှု၊ ပိန်ကြုံသောကြွက်သားကြီးထွားမှုနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တို့ကို တွေ့ကြုံခံစားသင့်သည်။ အရွယ်အစား တိုးလာခြင်းသည် ကျိုးနွံသော်လည်း လွန်ကဲခြင်း မဟုတ်ပါ။
Fluoxymesterone/Halotetin Steroid ကဘာတွေလုပ်သလဲ။
Halotestin သည် 50 နှစ်များအတွင်း Upjohn မှပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော fluoxymesterone ၏ကုန်သွယ်မှုအမည်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Ultandren အမည်ဖြင့် Ciba Pharmaceuticals မှလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ကြွက်သားထုထည်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့ခြင်း၊ အရိုးကျိုးခြင်းများကို ကုသခြင်းနှင့် တစ်သျှူးပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းကို အခြားဆေးဝါးများနှင့် တွဲသုံးခြင်း၊ ကော်တီကိုစတီရွိုက်များကဲ့သို့သော။
အမျိုးသမီးများတွင်၊ အလွန်ထိန်းချုပ်ထားသောဆေးများတွင်၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ သွေးဆုံးချိန်နှင့် ပြင်ပပြဿနာများတွင် ရင်သားကင်ဆာကုသရာတွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အသုံးပြုထားသည်။
ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ရာမှာ သုံးတယ်။
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလောကတွင် Halotestin သည် ပါဝါမြှင့်တင်သူများနှင့် အားကစားသမားများအတွက် အလွန်ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ယူဆပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ၎င်းသည် အကျိုးကျေးဇူးများကို တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သော်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သော hardener နှင့် cutter steroid တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအသုံးပြုရာတွင် Halotestin ၏ဖြစ်နိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်သက်ရောက်မှုများမှာ-
အလွန်ကောင်းမွန်သော ခွန်အားသည် Halotestin ၏ အရေးကြီးဆုံးနှင့် လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပြီး မကြာခဏဆိုသလို ကာယဗလသမားက ၎င်းကိုအသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ခွန်အားနှင့် စွမ်းအင် အကြီးအကျယ် မြှင့်တင်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် Halotestin ၏ သွေးနီဥဆဲလ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမှ လာပါသည်။ ဤတိုးမြှင့်ခွန်အားသည် အားကစားသမားတိုင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အဆင့်သစ်များသို့ တွန်းပို့ရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် အလုံးစုံ ရန်လိုမှု တိုးလာသဖြင့် ၎င်းသည် စွမ်းအားမြှင့်သမားများ၊ တိုက်ခိုက်ရေးသမားများနှင့် အခြားသူများ၏ ပြင်းထန်သော ခွန်အားကို နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော စရိုက်လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ် မကြာခဏဆိုသလို အသုံးဝင်စေသည်။
အတိအကျမဟုတ်ပေမယ့် အဆီဆုံးရှုံးမှု စတီးရွိုက် သို့မဟုတ် ဤဧရိယာရှိ အလွန်အစွမ်းထက်သော အာနိသင်ရှိသော တစ်မျိုးသည် အဆီဆုံးရှုံးမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်သော်လည်း သင်သည် အလွန်ပိန်နေပါက ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အမှန်တကယ် မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ယခင်ဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်များမှတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အဆီပမာဏများစွာကို မဆုံးရှုံးရသေးသူများသည် Halotestin ၏ အဆီဆုံးရှုံးမှုသက်ရောက်မှုများကို သတိပြုမိမည်မဟုတ်ပေ။
3) ရန်လိုမှုနှင့် မောင်းနှင်ခြင်း။
၎င်းကို အပျက်သဘောဆောင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် မကြာခဏ ယူဆသော်လည်း၊ ပြင်းထန်သော ရန်လိုမှုကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် Halotestin အသုံးပြုသူများ၏ အကျိုးကျေးဇူးအဖြစ်လည်း တန်ဖိုးထားပါသည်၊ အထူးသဖြင့် တိုက်ပွဲနှင့် စွမ်းအားမြှင့်ခြင်းကဲ့သို့သော အချို့သောလိုက်စားမှုများအတွက် အပိုဒရိုက်နှင့် စွမ်းအင်လိုအပ်သူများ၊ အထူးသဖြင့် အပိုဒရိုက်နှင့် စွမ်းအင်ကို လိုအပ်သူများဖြစ်သည်။ ဤတိုးမြှင့်ရန်လိုမှုအား အပြုသဘောဆောင်သောအသုံးပြုမှုရှိနေသရွေ့ Halotestin အသုံးပြုသူများသည် ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ် မရှုမြင်ပါ။
အထူးသဖြင့် ရှိရင်းစွဲစိတ်ခံစားချက် သို့မဟုတ် ဒေါသပြဿနာများကို ခံစားရတတ်သူများသည် ဤဝိသေသလက္ခဏာကို တန်ဖိုးထားသည့် အပြိုင်အဆိုင်နယ်ပယ်အပြင်ဘက်ရှိ အခြားဘဝကဏ္ဍများတွင် ရှိပြီးသား သဘောထားများကို ပိုမိုဆိုးရွားသွားစေနိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ Halotestin ကို အကြိမ်ရေနည်းသောပမာဏဖြင့် စတင်အသုံးပြုသူများသည် သင်၏ရန်လိုမှုအဆင့်များအပေါ် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သင်မည်မျှကောင်းစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်နည်း။ ထို့နောက် ဆေးများကို လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Halotestin ၏အသုံးပြုမှုအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုမှာ အစားအသောက်ကို အလွန်အမင်းကန့်သတ်ထားပြီး တင်းကျပ်သည့် ပြိုင်ပွဲအကြိုအဆင့်တွင်ဖြစ်ပြီး လူများစွာသည် နောက်ဆုံးအတားအဆီးမတိုင်မီ ရုန်းကန်ရမည့် သို့မဟုတ် လဲကျရမည့်နေရာဖြစ်သည်။ Halotestin သည် ပြိုင်ပွဲမစမီ အပြင်းထန်ဆုံးအချိန်များကို ဖြတ်ကျော်ရန် လိုအပ်သော အပိုကန်ဘောများနှင့် စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ယှဉ်ပြိုင်သူများသည် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် မာကျောမှုရှိသော ပြိုင်ဆိုင်မှုမတိုင်မှီ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ခြင်းမှလည်း အကျိုးကျေးဇူးရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤဧရိယာရှိ Halotestin ၏စစ်မှန်သောစွမ်းအားကိုသင်တွေ့မြင်လိုပါကဤသည်သာအလွန်ပိန်ကြုံသောခန္ဓာကိုယ်အဆီပမာဏအချို့နှင့်ပိန်ကြုံသောသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှကာယဗလသမားအတွက် ဒါကမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိ ကိုယ်ကာယအေးစက်မှုကို ခံယူသူတွေက ပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်မှုအဆင့်မှာ Halotestin ပေးနိုင်တဲ့အရာကို တန်ဖိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fluoxymesterone/Halotestin Powder ဆေးပမာဏ
စွမ်းဆောင်ရည်တိုးရန်အတွက် တစ်နေ့လျှင် 10mg-40mg ကြားပမာဏသည် လုံလောက်ပါသည်။ 10mg ဖြင့် သင်သည် အမှန်တကယ် မတူညီသော အာနိသင်များကို ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အလှအပဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များ၊ အထူးသဖြင့်အစွန်းရောက်သူများအတွက်၊ ဤအသုံးပြုမှုသည်တစ်နေ့လျှင် 40mg ဝန်းကျင်အထိအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းသည် ခံတွင်းစတီရွိုက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဇီဝရရှိနိုင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ၎င်းအား ဗလာဗိုက်ပေါ်တွင် ယူရန် အကြံပြုထားသည်။
6-8 နာရီ၏တစ်ဝက်သက်တမ်းရှိခြင်း၊ စုစုပေါင်းဆေးပမာဏ၏နေ့စဉ် 3-4 ပမာဏလိုအပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်တစ်နေ့လျှင် 40mg ကိုရွေးချယ်ပါက 10mg ကို6နာရီတိုင်းသောက်နိုင်သည်။
halotestin ကို သင်ပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုပါက၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ anabolic ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် သင့်တစ်ဦးချင်းစီသည်းခံနိုင်ရည်အဆင့်ကို သိရှိနိုင်ရန် နေ့စဉ် 5mg-20mg ကြားဆေးများဖြင့် စတင်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် တားမြစ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို စမ်းသပ်ရန် ပြင်ဆင်နေပါက၊ ၎င်းကို အသုံးပြုပြီးသည်နှင့်2လအထိ fluoxymesterone ကို တွေ့ရှိနိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။
Halotestin နှင့် Nandrolone Deconate
နှစ်မျိုးလုံးသည် ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆင်တူသော ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တူညီသော အန်ဒရိုဂျင် anabolic steroids များဖြစ်ကြသော်လည်း၊ သုတေသနပြုချက်များအရ nandrolone ကို အရိုးအဆစ်များကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု သုတေသီများက အကြံပြုထားသည်။ ၎င်းကို rotator cuff ဒဏ်ရာများအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကုသမှုအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
nandrolone ၏ အဓိကပစ်မှတ်မှာ အရိုးစုကြွက်သားများဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကြီးထွားမှုကို အစပျိုးပေးကာ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာစုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေကို နည်းပါးစေသည်။
Halotestin နှင့် Trenbolone
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် trenbolone သည်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သောအပြင်းထန်ဆုံး steroids များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Trenbolone ကို အစာစားချင်စိတ်နှင့် ကြွက်သားများ ကြီးထွားစေရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ Trenbolone သည် ကြွက်သားများမှ ဂလူးကို့စ် စုပ်ယူမှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ကြွက်သားများ၏ အကောင်းဆုံးကြီးထွားမှုကို ဖြစ်စေပြီး ပိန်သောကြွက်သားထုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
အသည်းအဆိပ်သင့်မှုသည် androgenic anabolic steroids နှစ်မျိုးလုံး၏ ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Halotestin နှင့် Dianabol
Steroids နှစ်ခုလုံးသည် ကြွက်သားကြီးထွားမှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ Testosterone ပမာဏကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အဆီများကို လောင်ကျွမ်းစေသောကြောင့် အလားတူလိုင်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်သည်။
Halotestin နှင့် Dianabol တို့သည် နိုက်ထရိုဂျင် ဟန်ချက်ညီမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သော်လည်း Dianabol သည် အီစထရိုဂျင်အဖြစ်သို့ အနံ့ထွက်ကာ မလိုလားအပ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Fluoxymesterone/Halotestin Powder ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကား အဘယ်နည်း။
anabolic steroids အားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ Fluoxymesterone သည် အလွန်အကျွံသောက်သုံးပါက အသည်းအဆိပ်သင့်ခြင်း (အသည်းအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်)။ ဤဟော်မုန်းကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း/အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများသည်- နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ အသည်းရောဂါ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ/ စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စွဲလမ်းမှု/ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု တိုးလာနိုင်သည်။ ငရဲ၊ အလွဲသုံးစားမှုများသည် သင်ရပ်တန့်ပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်/လများအတွင်း စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ နှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဂရုတစိုက်နဲ့ ပြုမူနေရင်တောင် အောက်ပါအချက်တွေအားလုံးကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
libido တိုး/လျော့ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မောင်းနှင်မှုတွင် ဆုံးရှုံးမှု/တိုးလာ)
အရေပြားအရောင်ပြောင်းခြင်း (cholestatic jaundice)
ရန်လိုမှု/ ရွိုက်ဒေါသ တိုးလာသည်။
Virilization (အမျိုးသမီးများ) - အသံနက်ရှိုင်းခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပိုလျှံနေသောဆံပင်များနှင့် နှုတ်ခမ်းကျယ်ခြင်း (ဤအရာသည် သင်ရပ်လိုက်သည်နှင့် အမြဲတမ်း နောက်ပြန်လှည့်၍မရပါ - ကျေးဇူးတင်သော်လည်း ကျေးဇူးမတင်ပါ)။
နာကျင်ခြင်း/ကြာရှည် စိုက်ထူခြင်း –4နာရီ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ (ရှားပါတယ်)
ရေဓာတ်ထိန်းထားမှု – ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရေ အပိုက ​​နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ် (မှတ်ချက်- မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ လက်/ခြေချင်းဝတ်/ခြေဖဝါးများ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် လဲလျောင်းနေစဉ် အသက်ရှုကြပ်ခြင်း လက္ခဏာများကို ရှာဖွေပါ)
သွေးတွင်းဂလူးကို့စ်ပမာဏ ကျဆင်းခြင်း (၎င်း၏ဇီဝဖြစ်စဉ်သက်ရောက်မှုကြောင့် ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များတွင်)
သွေးရည်ကြည် T4 ပမာဏ ကျဆင်းခြင်းနှင့် T3 နှင့် T4 (သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများ) ၏အစေးစုပ်ယူမှု တိုးလာခြင်း - သိုင်းရွိုက်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားမရှိသော်လည်း၊
သုတ်ပိုး ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းခြင်း/ အမျိုးသား မျိုးပွားမှု လျော့ကျခြင်း။
အကယ်၍ သင်သည် ဗိုက်အောင့်ခြင်း/ပျို့အန်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ မျက်လုံးဝါခြင်းနှင့် ဆီးမည်းခြင်းတို့ကို ခံစားရပါက၊ ထို့နောက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းစကားပြောရမည်။ အလားတူပင်၊ ပြင်းထန်သောဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခဲသော်လည်း၊ နီမြန်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း (မျက်နှာ၊ လျှာ၊ လည်ချောင်း) ကိုတွေ့ပါက၊ မူးဝေခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှုကျပ်လာပါက ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။
 Jerome Z. Litt; Neil Shear (17 ဒီဇင်ဘာ 2014)။ Litt ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးပေါက်ကွဲမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုများလက်စွဲ၊ 19th ထုတ်ဝေမှု။ CRC သတင်းစာ။ စစ၊ ၁၇၇-။ ISBN 177-978-1-84214-599။
 Saartok T, Dahlberg E, Gustafsson JA (1984)။ " anabolic-androgenic steroids များ၏ ဆက်စပ်ဆက်စပ်မှု ဆက်စပ်မှု- အရိုးစုရှိ အန်ဒရိုဂျင် receptors များနှင့် ဆီးကျိတ်အတွင်းရှိ အန်ဒရိုဂျင် receptors များအပြင် လိင်ဟော်မုန်း-binding globulin နှင့် ဆက်စပ်မှု" Endocrinology 114 (6): 2100–6။ doi-10.1210/endo-114-6-2100။ PMID 6539197။
 Kicman AT (2008)။ " anabolic steroids ၏ဆေးဝါးဗေဒ။ တောင်ယာ၊ J. Pharmacol 154 (3): 502–21။ doi:10.1038/bjp.2008.165။ PMC 2439524. PMID 18500378။
 J. Elks (14 နိုဝင်ဘာ 2014)။ ဆေးဝါးအဘိဓာန်- ဓာတုဒေတာ- ဓာတုဒေတာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျမ်းကိုးစာရင်းများ။ Springer စစ ၅၆၈-။ ISBN 568-978-1-4757-2085။
III ကို။ Fluoxymesterone (Halotestin) အမှုန့် HNMR
Eplerenone အမှုန့် (၁၀၇၇၄-၂၀-၉)
Masteron Enanthate (Drostanolone) အမှုန့်